Mirror, Arts na Crafts Factory Supplier-SHUNDA - High Quality Waya na mkpuchi metal mpịachi foldable Mkpụrụ Basket Detachable Kitchen Nchekwa Baskets OEM na Factory | SHUNDA
Nkata Mkpụrụ Metal
Ihe njide igwe
Ihe nchekwa igwe
Ọrụ nka osisi
Igwe ihe na-esi ísì ụtọ iko
Osisi PVC nabatara Seahorse Animal Beach Sign, ...
Ụlọ ọrụ China na-akpụ akpụ nke eriri osisi foto ...
Ezigbo ọnụahịa Zinc Alloy Metal Ime Ngwa Metal...
Waya dị elu na mkpuchi metal mpịachi foldabl ...
Mpempe akwụkwọ towel ojii nwere shelf kichin D...
Igbe osisi buru ibu nke nwere mkpuchi mkpuchi na ihu Cl ...
5pcs ọnwa na-esetịpụ shelf osisi ọnwa okirikiri mgbidi shel ...
osisi acrylic sliding mkpuchi mbukota onyinye Igbe
Ntụpọ osisi nwere mgbidi Shelf Osisi na-ese n'elu mmiri...
Mgbidi ọnwa Shelf nwere enyo osisi metal bac ...
Ndị na-emepụta igbe osisi China OEM Rectangular ̵...
China OEM na-ese n'elu shelf suppliers - Osisi ...
China OEM Double moon shelf Suppliers – Wall ...
China OEM Osisi etemeete Igbe Suppliers - Wall ...
China OEM Wall Hanging Shelf Suppliers - Woo ...
China OEM Osisi Onyinye Igbe Factory – ejiji ...
China OEM Osisi etemeete Igbe Factory – Osisi ...
Ụlọ ọrụ China OEM Hanging Wall Shelf Factories - Res ...
Waya dị oke mma nke nwere mkpuchi metal mpịachi mpịachi mkpụrụ osisi nkata a na-ewepụ anya kichin kichin
Ọnụ ego FOB: USD $1-3 / Mpekere | Nweta ọnụahịa kacha ọhụrụ
Ọnụ ọgụgụ nke Min. 1 Iberibe / Iberibe
Ikike inye: 1000 Iberibe / Iberibe kwa ọnwa
Port: Ningbo, Shenzhen, Guangdong, Qingdao, wdg
Usoro ịkwụ ụgwọ: T/TL/CD/PD/A MoneyGram Kaadị kredit PayPal Cash Escrow Ndị ọzọ
Nkọwa nnyefe: Ụbọchị 7
Ihe mba. SD-10255
Nkọwa BASKET Mkpụrụ osisi
Ihe onwunwe Ọla
Ụdị ihe Ígwè
Egwuchara elu Qire na mkpuchi
Waya Dia dị ka ngwaahịa ma ọ bụ ahaziri
Agba Oji, ocha, ọlaọcha, wdg
MOQ 1 ibe
Nkwakọ ngwaahịa katọn
Oge Mbuga ozi Ihe dị ka ụbọchị ọrụ 10 mgbe ị nwetasịrị nkwụnye ego ahụ
Oge ịkwụ ụgwọ TT, Paypal, veem, Escrow, Western Union, ego, wdg
Mbupu Site na ikuku, site n'oké osimiri, site na Express (DHL, TNT, UPS, EMS, Fed Ex)
Ụlọ ọrụ na mmepụta Line
SHUNDA Crafts na-arụpụta, mbupụ, ma na-enye ụdị enyo niile (enyo Glass, Moon Mirror, Mirror na Shelf, Metal Frame Mirror, wdg), nka osisi (Shelf osisi, Shelf Wall Shelf, Shelf na-ese n'elu osisi, igbe nkwakọ osisi, osisi Igbe, wdg) Ọkpụkpụ ọla (ọla ọla, ihe mkpuchi igwe, nkata mkpụrụ osisi metal, onye na-ejide mkpụrụ osisi metal, onye na-ejide akwụkwọ mpempe akwụkwọ, wdg) Nka iko ( karama iko, karama ihe na-esi ísì ụtọ, wdg), Nka resin na ihe ịchọ mma seramiiki ma ọ bụ onyinye maka Krismas, Halloween, Ista na Valentine na ndị ọzọ. Na ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na mgbalị, anyị na-mere n'ime a home mma ulo oru ọkọnọ yinye, na ahịa n'usoro ulo oru yinye, gụnyere mirror, shelf, oriọna na yiri ngwaahịa. Na anyị nwere usoro njikwa mma zuru oke iji chịkwaa usoro ọ bụla site na ihe, ihe nlele, mmepụta, mbupu na mbupu iji hụ na ngwaahịa ọ bụla zuru oke.
Anyị insit na ụkpụrụ nke ndị ahịa mbụ, àgwà mbụ, kasị mma price na ọrụ. Anyị na-atụkwa anya ka gị na gị nwee mmekọrịta azụmahịa ogologo oge.
Anyị nwere ọwa yinye siri ike yana ahịrị ngwaahịa zuru oke, nke nwere ike gboo ụdị mkpa ndị ahịa dị iche iche.
Anyị nwere a agadi otu nke ndị na-emepụta, ibu ngwaahịa mmepe ike, elu mmepụta technology, ọkachamara ahịa otu iji nye ndị ahịa otu nkwụsị ọrụ ngwọta.
Ugbu a, anyị nwere mmekọrịta miri emi na ọtụtụ puku ụlọ ọrụ dị elu n'ụlọ na ná mba ọzọ. A na-ebupụ 80% nke ngwaahịa anyị. Onye ọ bụla SHUNDA na-ekwe gị nkwa ọkwa dị mma yana ọkachamara, ịkwụwa aka ọtọ na ịrụ ọrụ dị elu. Anyị kwenyere na anyị ga-abụ onye mmekọ ntụkwasị obi gị n'ọdịnihu.
Maka mbupụ, anyị nwekwara ndị otu azụmaahịa ọkachamara na ndị otu R&D mgbe niile na ọrụ gị. Anyị na-enye ọrụ a na-ekwe nkwa maka ịzụta, nhazi na ịhazi mbupu ngwaahịa. Anyị na-eji ọnụ ala dị ala, obere oge na ụgbọ njem kacha dịrị nchebe na-ebufe. Afọ ojuju gị bụ ike na owuwe ihe ubi anyị kachasị!
1. OEM & ODM, enyo ọ bụla nwere ike ịhazi ya na agba, nha.
2. Ajụjụ gị gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọnụ ahịa anyị ga-aza n'ime awa 1.
3. Ogo kacha mma, ọnụahịa asọmpi na nnyefe oge.
Ụlọ ọrụ Shunda Home Decoration bụ ọkachamara na-ebubata enyo nke na-enye mmepụta, imewe, ahịa na mgbe ọ na-ere ahịa maka ndị ahịa ụwa. Ụlọ ọrụ anyị na-elekwasị anya n'ichepụta na ịmepụta ụdị ngwaahịa enyo dị iche iche dị ka enyo gburugburu, enyo ọkara ọnwa, enyo enyo ọnwa wdg.nke a na-ejikarị n'ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa ịzụ ahịa, ụlọ ahịa, ụlọ akwụkwọ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, anyị na-enyekwa OEM na ODM ọrụ azụmahịa.
Ngwaahịa dị elu, asọmpi ọnụahịa na ọrụ kacha mma bụ ịchụso anyị n'akwụsịghị akwụsị. Nweta ahụmịhe na mmepụta enyo na mbupụ kwenyere nwere ike inye gị ahụmịhe imekọ ihe ọnụ. Site na arụmọrụ ọhụrụ, ụdị dị iche iche na ọrụ ezi uche dị na ya,ngwaahịa anyị emeriwo pralse na ntụkwasị obi nke ndị ahịa anyị, na-atụ anya ozi gị ma nabata na China.
1. Ajụjụ: Ị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ ịzụ ahịa?
A: Ụlọ ọrụ. Anyị na-agba mbọ ka ị bụrụ ụlọ nrụpụta kacha mma na ụlọ ọrụ nka nka & nka site na imepụta ihe ọhụrụ, ọkachamara, ịdịmma na ọnụahịa asọmpi.
2. Enwere m ike ịnweta usoro nlele maka ọkụ ọkụ?
A: Ee, anyị na-anabata usoro nlele iji nwalee ma lelee ogo. A na-anabata ihe atụ agwakọtara.
3. kedu ka anyị ga-esi kwe nkwa ịdị mma?
4. Ajụjụ: Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ gị?
A: TT, PayPal, veem, Western Union, Escrow, ego, wdg
5.Q: Gịnị bụ usoro nnyefe gị?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP na ụfọdụ ndị ọzọ okwu mkpa ndị ahịa.
6. Enwere ụzọ ọ bụla isi wedata ọnụ ahịa mbupu iji bubata na obodo anyị?
A: Maka obere iwu, nkwupụta ga-abụ ihe kacha mma; Maka nnukwu usoro, njem ụgbọ mmiri ga-abụ nhọrọ kacha mma gbasara oge mbupu. Maka iwu ngwa ngwa, anyị na-atụ aro ka a ga-enye ụgbọ njem ụgbọ elu na ọrụ nnyefe ụlọ nke onye mmekọ ụgbọ mmiri anyị.
Nke gara aga: Mpempe akwụkwọ eji akwa akwa akwa ojii nwere shelf kichin n'okpuru kabinet trivets metal Rack Toilet Roll Tissue Paper Holder
Osote: Nkata Njide Towel Akwụkwọ nwere tebụl kichin n'okpuru kabinet trivets metal Rack Toilet Roll Tissue Paper Holder
*Nabata ahaziri enyo ụdị ọ bụla*
Omenkà ejiri aka mee
Ọ dị mma ma dị mma n'iji
Onyinye zuru oke maka ezinụlọ na ndị enyi yana ezigbo ihe ịchọ mma
nkata mkpụrụ osisi
nkata mkpụrụ osisi ígwè
Ntụpọ ntụpọ nwere mgbidi Shelf Osisi na-ese n'elu mmiri Sh ...
Na-esusu ọnụ resin azụ̀ ọla edo abụọ ma ọ bụ ọla ọla kọpa m...
30ml, 60ml, 120ml Glass senti karama ikuku diffus ...
china N'ogbe Custom Round Shape tree Kọfị ...
Osisi Hanging Shelf 3-Tier, Boho Rustic Wood Swi ...
Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị, biko hapụ email / whatsapp gị na anyị ga-akpọtụrụ n'ime awa 12.
Osisi PVC Nnabata Animal Beach ịrịba ama ...
N'ogbe omenala Multifunctional Hanging ...
Nkata nkodo mkpụrụ osisi nwere oyi akwa atọ...
osisi akara Christmas pendant Creative co...
China soplaya 4pcs setịpụrụ okirikiri ọnwa na-adọ ...
Adreesị: NO.158WANGCHAO RD SHANGCHENG DISTRICT, HANGZHOU CHINA.